चुनावमा कांग्रेसलाई पहीलो पार्टी बनाउने प्रधानमन्त्री वलीको आश्वासन - Mero Pradesh
काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर आगामी चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसँग भेटेर विश्वासको मत लिने क्रममा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै अब आउने चुनाबमा कांग्रेसलाई पहिलो बनाउने र आफू नेतृत्वको एमाले दोस्रो पार्टी बनाएर काम गर्ने भन्दै आफुलाई योपटक विश्वासको मत दिन आग्रह गरे ।
तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतले उक्त प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका छन । प्रधानमन्त्रीले चरणबद्ध रुपमा गलत कामहरु गर्दै आएकाले विश्वासमा मत दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको भेटमा सहभागि कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले जानकारी दिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले अपेक्षा गरेजस्तो संसदबाट विश्वासको मत दिएर अहिले जान सक्ने अवस्थामा कांग्रेस नरहेको देउवाले प्रष्टाएका छन् । तपाईंलाई विश्वासको मत दिने अवस्था अहिले छैन, बैठकमा देउवाले राखेका कुराबारे महतले भने, ‘सत्ता सहकार्यका कुरा हामीले अहिले गर्ने अवस्था पनि छैन। विपक्षी दलका हिसावले पनि यो कुरा सम्भव छैन । कांग्रेसले वैशाख २७ मा संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीका विरूद्ध मतदान गर्ने पनि महत बताउँछन् ।
्रप्रतिनिधिसभा विघटन,लुम्बिनी प्रदेशमा अल्पमतमा परेका नेतालाई मूख्यमन्त्रीमा सपथ खुवाएको लगायतका विषयमा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो । सरकारले मंगलबार र बुधबार ल्याएको अध्यादेशको पनि कांग्रेसले विरोध गरेको बताए । प्रधानमन्त्रीलाई कोरोना विरुद्धको खोप आयात देखि अन्य विषयमा भ्रष्टाचार हुन सक्ने विभिन्न विषयमा प्रश्न उठाएको महतले जानकारी दिए । त्यस्तै कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा खोप अभियानमा पनि सरकार असफल भएको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ ।
ेभेटको क्रममा ओलीले एमाले र कांग्रेस मिलेर अघि बढ्न सके निष्पक्ष चुनाव गराउने आश्वासन दिएका थिए । त्यसैगरी सत्ता साझेदारीका लागि पनि ओलीले प्रस्ताव राखेको भेटमा सहभागि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
लोकतन्त्रका लागि संगै लडेको पार्टी भएकाले फेरी पनि मिलेर जानुपर्नेमा ओलीले जोड दिए पनि आफूहरुले अस्वीकार गरेको कांग्रेस नेता पौडेलले बताए । संवैधानिक परिषदको अपमान गरेको र अदालतले संसद विघटन गरेपछि पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिएको भन्दै कांग्रेस नेताहरुले ओलीकै आलोचना गरेको पौडेलले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलोपटक ओली देउवा निवास गएका थिए । काँग्रेसका तर्फबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्रीद्धय डा. शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्का, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक लगायत सहभागी थिए । ओलीको प्रस्ताव सुनेपछि नेताहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल,गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र संसदीय दलका नेता उपनेता सुवास नेम्बाङसहित देउवा निवास पुगेका थिए ।